အစိုးရ ဌာနကြီးတစ်ခုရဲ့ ရုံး ၃ ရုံးပေါင်းမှာ မီးချောင်းစုစုပေါင်း ၆,၅ဝဝ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို LED မီးချောင်းတွေနဲ့ အစားထိုးဖို့ Project Proposal တစ်ခု စမ်းလုပ်နေတာ အောက်ပါ အတိုင်း တွက်ချက်ရရှိပါတယ်။
၁။ 18 Watt LED ဆိုတော့ ရိုးရိုးထက် တစ်ချောင်းကို 18 Watt သက်သာတယ်။ တစ်နေ့ကို အလုပ်ချိန် ၈ နာရီ ထမင်းစားချိန် ပါ ပါယင် တစ်နေ့ ၉ နာရီထွန်းပါတယ်။ သက်သာသွားတဲ့ တစ်နှစ်စာ လျှပ်စစ် ယူနစ်စုစုပေါင်းက 18 Watt x9hr x 6,500 nos. x 242 days ÷ 1,000 = 254,826 KWhr ဖြစ်တယ်။
တစ်ယူနစ် ၅ဝ နှင့်တွက်ပါက တစ်နှစ်ကို ၁၂၇ သိန်းသက်သာပါတယ်။
၂။ Fluorescent မီးချောင်းက တစ်နှစ်ကို တစ်ချောင်း လဲရတယ်။ ဈေးအစားစားရှိပြီး တစ်ချောင်း 1,200 ကျပ်နဲ့ တွက်ယင် ကုန်ကျစရိတ်က 1,200 Kyat x 6,500 nos. = ကျပ် ၇၈ သိန်း။
၃။ ချုပ်က ၃ နှစ် တစ်ခါ လဲရပြီး ပျမ်းမျှ 1,200 ကျပ်နဲ့ တွက်ယင် တစ်နှစ်ကို 400 ကျပ် ကျတယ်။ စုစုပေါင်း 400 Kyat x 6,500 nos. = ၂၆ သိန်း။
၄။ တစ်နှစ်ကို သက်သာသွားမည့် စုစုပေါင်း ပမာဏက ၁၂၇ + ၇၈ + ၂၆ = ၂၃၁ သိန်းပါ။
၅။ LED မီးချောင်းက နာရီ ၂ သောင်း ခံတယ်ဆိုတော့ ထွန်းတဲ့ နာရီအရ ၉ နှစ် ကျော် ခံမယ်၊ (ကျွန်တော့်ရုံးနဲ့ အိမ်မှာ တပ်ထားတဲ့ နာမည်မရှိတဲ့ ကောင်တွေတောင် အခု ၆ နှစ် ရှိပြီ၊ လဲစရာ မလိုသေးဘူး။)
၉ နှစ်အတွက် သက်သာသွားတဲ့ ငွေက9Yr x 23,100,000 = ကျပ် သိန်း ၂,ဝ၇၉။
၆။ LED မီးချောင်းက တပ်ဆင်ခ အပြီး ကျပ် ၁ သောင်းတန် တပ်ယင် စစခြင်း အရင်း သိန်း ၆၅ဝ ကျမယ်။ အဲဒါကို ဘဏ်က ချေးမယ်၊ အတိုး ၁၃% နဲ့၊
အစီအစဉ်က နှစ်စဉ် သက်သာသွားတယ်ဆိုတဲ့ ငွေ ကျပ် ၂၃၁ သိန်းကို အသုံးပြုပြီး နှစ်စဉ် အတိုးပေး၊ ပိုငွေကို ကနဦး ချေးငွေ သိန်း ၆၅ဝ ကို ဖဲ့ဆပ်၊ ဒုတိယနှစ်ကျတော့ အတိုးက သက်သာသွားပြီ၊ ပိုငွေကို ကနဦး ချေးငွေကို ထပ်ဆပ်၊ ဒီနည်းနဲ့ တွက်ယင်
၇။ ပထမ နှစ်မှာ သိန်း ၆၅ဝ အတွက် အတိုး = ၈၄ သိန်းခွဲ။ ၂၃၁ သိန်း ထဲက ဒီအတိုးကိုနှုတ်ယင် ၁၄၆ သိန်းခွဲ။ အဲဒါကို ကနဦး ချေးငွေကို ဆပ်။ ၆၅ဝ - ၁၄၆.၅ဝ = ၅ဝ၃ သိန်းခွဲကျန်မယ်။
၈။ ဒုတိယနှစ် ၅ဝ၃ သိန်းခွဲအတွက် အတိုးက ၆၅ သိန်းခွဲ၊ ၂၃၁ သိန်း ထဲက ဒီအတိုးကိုနှုတ်ယင် ၁၆၅ သိန်းခွဲကျန်တယ်။ အဲဒါကို ကနဦး ချေးငွေအတွက် ထပ်ဆပ်။ ၅ဝ၃ သိန်းခွဲ - ၁၆၅ သိန်းခွဲ = ၃၃၈ သိန်းကျန်တယ်။
၉။ တတိယနှစ် ၃၃၈ သိန်း အတွက် အတိုးက ၄၄ သိန်း၊ ၂၃၁ သိန်း ထဲက ဒီအတိုးကိုနှုတ်ယင် ၁၈၇ သိန်းကျန်တယ်။ အဲဒါကို ကနဦး ချေးငွေအတွက် ထပ်ဆပ်။ ၃၃၈ သိန်း - ၁၈၇ သိန်းခွဲ = ၁၅၁ သိန်းကျန်တယ်။
၁ဝ။ စတုတ္ထနှစ် ၁၅၁ သိန်း အတွက် အတိုးက သိန်း ၂ဝ၊ ၂၃၁ သိန်း ထဲက ဒီအတိုးကိုနှုတ်ယင် ၂၁၁ သိန်း ကျန်တယ်။ ကနဦး ချေးငွေကျန်တာက ၁၅၁ သိန်းပဲရှိတာဖြစ်သည့်အတွက် ဒီ ၄ နှစ်ပြီးပါက အယင်းကျေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ၄ နှစ်စာ အတိုးက ၈၄ သိန်းခွဲ + ၆၅ သိန်းခွဲ + ၄၄ သိန်း + သိန်း ၂ဝ = ၂၁၄ သိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦး သိန်း ၆၅ဝ နှင့်ပေါင်းပါက ၈၆၄ သိန်းပါ။
၁၂။ ၉ နှစ် ခံမည့် LED မီးချောင်းအတွက် စုစုပေါင်း သက်သာသွားမည့် သိန်း ၂,ဝ၇၉ ထဲက သည် ၈၆၄ သိန်းကို နှုတ်ပါက သိန်း ၁,၂၁၅ သက်သာသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ လက်တွေ့မှာ မီးချောင်းတိုင်း တစ်နေ့ ၉ နာရီ အပြည့် ထွန်းချင်မှ ထွန်းမှာဖြစ်သလို မီးချောင်းတိုင်း တစ်နှစ်တစ်ခါ လဲဖို့ လိုချင်မှ လိုမှာပါ။ ချုပ်လည်း ထို့အတူပါပဲ။ ဒီအတွက် အခုတွက်ထားတာထက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာနိုင်ပါတယ်၊ သို့သော် လက်ရှိမီတာခ တစ်ယူနစ် ၅ဝ ကနေ အနည်းနဲ့ အများ တက်လာမှာပါ၊ ဒါဆို နှစ်အလိုက် ကုန်ကျစရိတ်က တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အရေးကြီးသည့်နေရာ လူတွေ အလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွေမှာ အလင်းရောင်လုံလောက်အောင်ရဖို့ Fluorescent မီးချောင်း တစ်ချောင်းနေရာမှာ LED မီးချောင်း ၂ ချောင်းလောက် ထွန်းရတာမျိုးလည်း ရှိမှာဖြစ်သည့်အတွက် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်၊ အတိုးနှုန်း စသည်တို့ တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ စုစုပေါင်း သက်သာငွေ သိန်း ၁,၂ဝဝ မဟုတ်ယင်တောင်မှ သိန်းရာကြီး ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်အနေနဲ့လည်း Standard အတိုး ၁၃% ရတယ်၊ မလိုအပ်ပဲ မီးတွေ သုံးစရာမလိုတော့ဘူး။
UN Environment Program နဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်အရ မီးစားသက်သာတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုရေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပါဝင်ဖို့အကြောင်းကြားစာရတာ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် သူတို့မပါပဲ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ငွေချေးပြီး လုပ်ယင်ကောဆိုပြီး တွက်ကြည့်တာ အခုအတိုင်းထွက်နေပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ပြီး တွက်ချက်၊ ရေးသား၊ သက်ဆိုင်ရာနဲ့ တင်ပြ ဆွေးနွေး အကောင်အထည်ဖေါ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဌာန တစ်ခုထဲ ရှိပါသေးတယ်။
Aye Kyaw Kyaw Critics Technology